जिम्मेवार पक्ष नै फँडानीमा लाग्ने हो - जनताको आवाज - साप्ताहिक
पाल्पाका केही स्थानका सामुदायिक वनको काठ कुहिएर खेर गैरहेको छ । केही कर्मचारीको मिलोमतोमा वन फँडानी हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । जिम्मेवार पक्ष नै फँडानीमा लाग्ने हो भने अरूको के कुरा ?
- पवन पौडेल
विशेष गरी खाडी राष्ट्र र अन्य केही मुलुकमा नेपाली कामदारहरू बिचल्लीमा परेका घटना दिनहुँ सुन्न पाइन्छ । सम्बन्धित देशका राजदूतावास तथा नेपाल सरकारले त्यता ध्यान दिएको देखिँदैन । किन अझै सरकार र दूतावासहरू मौन छन् ?
- कमल आचार्य
खाना खाने, पढ्ने बेला बिजुलीको लाइन काटिन्छ। बिजुलीको वैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ, त्यतातिर पनि सोच्ने कि? देशलाई कहिलेसम्म अँध्यारोमा राखिरहने?
- माधव कुश्वाहा
महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा डायलसिस मेसिन बिगि्रएको धेरै भैसक्यो । यसले गर्दा मृगौला बिगि्रएका बिरामीहरूलाई असर पुगिरहेको छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा किन बेवास्ता ? तत्काल नयाँ मेसिन झिकाउन पहल गरियोस् ।
- सन्तोष कार्की,
धनुषामा कतै आगलागी हुँदा २४ वर्ष पुरानो बारुण यन्त्रको भर पर्नुपर्छ । नयाँ वारुण यन्त्र ल्याउन जति पटक आवाज उठाए पनि कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । डेढ महिनामा मात्र ३७ वटा आगलागी भए । तैपनि किन सम्बिन्धित पक्षले ध्यान दिँदैन ?
- दीपक महतो
भक्तपुरका इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरलाई छाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगले गाँज्दै लगेको छ । बालबालिका तथा मजदुरहरू त्यसको सिकार भएका छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने काममा कसैले सहयोग गरे हुने थियो ।
- प्रवीन चौधरी, नीलिमा चौधरी
बाग्मती नुहाउन लायक बन्नु सुखद पक्ष हो । सधैंभरि यस्तै पवित्र हुन्छ कि केही दिनलाई मात्र हो ?
- दर्शन क्षेत्री